Zvakanakisa Zvishandiso zveWoocommerce Email Kushambadzira | Martech Zone
Woocommerce ndiyo inonyanya kufarirwa uye zvine nharo imwe yemhando yepamusoro eCommerce plugins yeWordPress. Iyo yemahara plugin iri nyore uye yakatwasuka kumisikidza uye kushandisa. Hapana mubvunzo nzira yakanakisa yekushandura yako WordPress webhusaiti mune yakazara inoshanda e-commerce chitoro!
Nekudaro, kuti uwane uye chengetedza vatengi, iwe unoda zvinopfuura rakasimba eCommerce chitoro. Unoda yakasimba email kushambadzira zano panzvimbo yekuchengetedza vatengi uye kuvashandura kuva vatengi vanodzokorora. Asi chii chaizvo chinonzi email kushambadza?
Email kushambadzira inoreva chiito chekusvika kune vatengi kuburikidza neemail. Email ichine iyo yakanakisa ROI yechero yekushambadzira chiteshi. Saizvozvo, Iyo Yakananga Yekushambadzira Association inoshuma kuti email kushambadzira ROI iri $ 43 yedhora roga roga rakashandiswa, ichiita iro rinobudirira kwazvo kushambadzira chiteshi chekutyaira kutengesa.
Email kushambadzira inoshandiswa muecommerce ku:
Ongorora vatengi vako
Kudza vatengi vasina kugadzirira kutenga izvozvi
Tengesa kune vatengi vakagadzirira kutenga.
Kusimudzira zvigadzirwa zvevamwe vanhu (semuenzaniso zvakabatana kushambadzira)
Dhiraivha traffic kune nyowani post / blog
Nei Woocommerce Iri Iyo yepamusoro eCommerce Platform:
Woocommerce inogona kushandiswa kutengesa chero chinhu
Nzvimbo yakavimbika uye yakachengeteka
Mhando dzakasiyana dzemapulagini kusarudza kubva
Kurumidza & nyore kuisa-up
Kuti ikubatsire iwe kugadzira yakanakisa email kushambadzira zano, isu tichagovana yepamusoro 5 email kushambadzira maturusi; iwe unofanirwa kuita kuti yako email kushambadzira iende. Saka ngatitangei!
5 Akanakisa Zvishandiso zveWoocommerce Email Kushambadzira
Ichi chishandiso chekubatanidza saiti yako kuMailchimp, imwe yeanonyanya kufarirwa eemail ekushambadzira masevhisi aripo. Ichi chishandiso chinokugonesa iwe kuvaka mafomu, tarisa analytics, uye zvimwe zvakawanda. Mailchimp inopa e-commerce vatengesi zvishandiso zvinodiwa kubatsira kutyaira kutengesa. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuyananisa yako mutengi uye odha dhata kuti iite mashandiro emabasa uye tuma yakanangiswa mishandirapamwe. Chikamu chakanakisa? Iyo yemahara zvachose! Key zvinhu:
Gadzira mafomu etsika-ekusaina uye wobva wawedzera kune yako WordPress saiti
Sangana nemhando dzakasiyana siyana dzekuvaka fomu uye e-commerce plugins
Wona zvakadzama mishumo nezve ako mishandirapamwe
Tumira otomatiki ziviso kana vanyori vatsva vasaina
Saina Kuti Uwane Mailchimp
Jilt ndeye yese-mu-imwe email yekushambadzira chikuva chakavakirwa izvo zvido zveWooCommerce zvitoro. Nerubatsiro rwepuratifomu iyi, unogona kutumira matsamba, zviziviso zvekutengesa, otomatiki ekutevera-maemail, mareti, ziviso, nezvimwe! Iwe unogona kutarisa kune otomatiki, segmentation, uye transactional maemail, zvese pasina kubayira pane dhizaini mhando. Zvinhu zvakakosha zvinosanganisira:
Ine WooCommerce kusangana.
Tumira chiziviso chekutengesa
Wedzera kuyambuka-kutengesa uye kusimudzira kumaemail.
Chikamu chakavakirwa pakutenga kwekare uchishandisa yepamusoro segmentation injini
Dzosera mari pamwe neakasiya ngoro maemail.
Yakadzama mashandiro metric eemaimeri ese
Iyo inoshamisa email dhizaini, iine yekudhonza-uye-kudonha ma module
Tanga Yako Jilt Muedzo
Kutevera-Ups chishandiso chinokubatsira zvirinani kubatanidza vatengi vako nekugadzira yakaoma madhizaini ekushambadza anoenderana nezvinodiwa nevashandisi, uye nhoroondo yekutenga kutyaira kutengesa uye kuita kwepamusoro, zvese zvine kuyedza kushoma munzira dzakawanda dzekutengesa. Key zvinhu dzinosanganisira:
Kukura kwekutevera-kuita mushandirapamwe
Tevera kukosha kwevatengi
Tumira maTweets kwauri tarisiro
Yakadzama analytics- (kuvhura / kudzvanya / kutumira / nezvimwewo)
Gadzira uye gadzirisa zvinyorwa zvetsamba
Mahara uye echinyakare matemplate
Google analytics kusangana
Dhawunirodha iyo Inotevera-Ups Plugin
Omnisend ndicho chishandiso chakanakisa chekugadzira otomatiki uye echinyorwa eCommerce maemail. Inotarisira kubatsira eCommerce mabhizinesi kuti kushambadzira kwavo kuve kwakakodzera nekutumira mameseji akasarudzika kune munhu chaiye, panguva yakakodzera, vachishandisa nzira chaiyo. Iyo yekudhonza-uye-kudonhedza ficha inowirirana zvigadzirwa zvako uye inokutendera iwe kuti uise ruzivo rwechigadzirwa mune ako matsamba ezvinyorwa uye otomatiki makwikwi. Zvinhu zvakakosha zvinosanganisira:
Iyo ine WooCommerce kusangana.
Sanganisa maSMS, webhu push notices, Facebook Messenger, uye zvimwe zvakawanda mumushambadziro wako wekushambadzira
Tumira meseji chaiyo ichienda kumutengi chaiye panguva yakakodzera, nguva dzese uchishandisa automation.
Gadzira akachinjika zvikamu zvinoenderana neyako maitiro
Iwe unogona kuyananisa mafoni kubva kune yako WordPress dhatabhesi.
Gadzira mapeji ekumhara uye popups zviri nyore.
Teedzera kutengesa kuita kuburikidza nenzira dzakasiyana
Tanga Yako Omnisend Muedzo
Mailpoet chishandiso chakanyanya-scalable chine zvese zvemahara uye zveprimiyamu. Iyo piyona WordPress email kushambadzira chikuva iyo inokutendera iwe kuti uite zvese zvakanaka kubva kune yako WordPress dashibhodi. MailPoet inoti inotumira maemail akanaka anosvika mumabhokisi emabhokisi nguva dzese uye anogadzira vakatendeka vanyori. Iyi chikuva chakagadzirirwa varidzi vesaiti vakabatikana, ichivabatsira kutanga mumaminetsi. Zvinhu zvakakosha zvinosanganisira:
MailPoet ine yakananga WordPress plugin.
Iwe unogona kugadzira fomu yekunyorera, uye kuiisa chero kwaunoda pane yako saiti.
Vaka maemail kungave kubva pakutanga kana nekushandisa akasiyana matemplate
Gadzira akasiyana akanyorwa ekunyorera, uye maneja iwo mukati meiyo WordPress
Tumira otomatiki kusaina Notices uye gamuchira maemail.
Saina kuti MailPoet
Nekodzero yekushambadzira eemail uye ma plugins, iwe unogona nyore nyore kubata ese maficha eemail kushambadzira chaipo kubva kunyoreswa fomu fomu, gadzira email, rondedzero manejimendi, analytics kuteedzera, uye zvimwe - chaipo kubva paWebhusaiti yako webhusaiti. Kugadzira nekutarisira otomatiki maemail hakuna kumbove kuri nyore, nekuda kwezvishandiso zvataurwa pamusoro. Edza zvishandiso, ona maficha uye zvirongwa zvemitengo usati wasarudza chishandiso chakanakira iwe.
Zvinokurudzirwa kuve nechikwata chevanyanzvi veWordPress kubva kumahofisi akavimbika senge Vanosimudza ndiani anokwanisa kunzwisisa kuomarara kwebhizimusi repamhepo. Ivo vanogona kukubatsira iwe kuvaka yako yetsika eCommerce chitoro pamwe nekukubatsira iwe kubatanidza ese anodikanwa email email kushambadzira plugins.
Kuzivisa: Tiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo muchinyorwa chino.
Tags: yakananga kushambadzira musanganoecommerceecommerce emailecommerce chikuvaemail kusanganaEmail Marketingemail roizvinoteverajilt emailmailchimpMailPoetomnisendwoocommerce
Sheryl ndiye Sr. Kushambadzira Nyanzvi kuUplers uyo ane ruzivo rwakakura mukugadzira zvakanyatsotsanangurwa nzendo dzemushandisi kudunhu rekushambadzira kwedigital. Iye anoregedza hunyanzvi hwekushambadzira kwedhijitari kubatsira mabhizinesi kudhirowa akakosha maIO
Sei Uye Nei Uchinyoresa A Kugovera Email Kero yeiyo Corporate Google Akaundi